ပန်ကရိယ (Pancreatitis) တွင်သင်ဘာနှင့်မစားနိုင်သည့်အရာများ၊ အစားအစာစာရင်း - Keto Eat&Fit
ပန်ကရိယ (Pancreatitis) တွင်သင်ဘာနှင့်မစားနိုင်သည့်အရာများ၊ အစားအစာစာရင်း
11 စက်တင်ဘာ 2021
ပန်ကရိယရောင်ရမ်းခြင်း (Pancreatitis) သည်ပန်ကရိယတွင်ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုအသွင်ဖြစ်ပေါ်သောရောဂါဖြစ်သည်။အစားအသောက်နှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ချိုးဖောက်မှုကြောင့်စည်းမျဉ်းတစ်ခုအဖြစ်ပိုဆိုးလာသည်။အစားအသောက်အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာခြင်းသည်နာတာရှည်ပန်ကရိယရောဂါပြင်းထန်သောလူနာများကိုပြင်းထန်စွာကာကွယ်ပေးသည်။
လူများစွာအတွက်၊ အစားအစာသည်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအဖြစ်တင်ပြခဲ့ပြီး၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ငြင်းပယ်ရန်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်ခိုင်းစေခဲ့သည်။ဥပမာအားဖြင့်ပန်ကရိယရောဂါအတွက်အစားအစာသည်အစားအစာများစွာအတွက်ကန့်သတ်ထားသော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းသည်မျှတပြီးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရဓာတ်များ (ပရိုတိန်း၊ အဆီ၊ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်၊ ဗီတာမင်များ) ကိုခန္ဓာကိုယ်အားမဆုံးရှုံးစေပါ။ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၎င်းသည်လူနာအားကျန်းမာ။ အာဟာရပြည့်ဝသောအစားအစာသို့ပို့ဆောင်သည်။နာတာရှည်ပန်ကရိယရောဂါရှိသောလူနာသည်သက်သာခြင်း (ရောဂါလက္ခဏာများလျော့ကျခြင်း) အဆင့်တွင်ပင်အစားအသောက်ကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်ကိုသတိရပါ။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ပန်ကရိယကတစ်ဖန်ပြန်ပြီးရောင်ရမ်းလာပြီးရောဂါကိုပိုဆိုးစေနိုင်တယ်။
ပိုမိုပြင်းထန်လာချိန်တွင်အာဟာရသည်ဆာလောင်မွတ်သိပ်။ ၁-၃ ရက်အနားယူပါ။နှင်းဆီတင်ပါးသို့ဓာတ်ငွေ့မပါဘဲဓာတ်ဆားရည်ဖြင့်ဖြည့်ထားသောအရက်ကိုသာသောက်ခွင့်ပြုသည်။အားနည်းသောလက်ဖက်စိမ်း (သို့) ဂျယ်လီကိုလည်းခွင့်ပြုသည်။နာကျင်မှုသက်သာသောအခါ၊ သင်ပြုတ်ထားသောအသားအနည်းငယ်၊ အဆီနည်းအိမ်တွင်းဒိန်ခဲ (သို့) ဒိန်ခဲနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းရည်တို့ဖြင့်ဟင်းချိုထည့်နိုင်သည်။နာတာရှည်ပန်ကရိယရောဂါအတွက်အခြေခံအာဟာရအခြေခံအချက်များ
အစားအစာသည်အဓိကအားဖြင့်အသားဓာတ်ပါ ၀ င်သောအစားအစာများဖြစ်သင့်သည်။ပရိုတင်းသည်ပန်ကရိယရှိပျက်စီးသွားသောဆဲလ်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရာတွင်အလွန်အကျိုးရှိသည်။
အလွယ်တကူချေဖျက်နိုင်သောကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်များ (သကြား၊ ယို၊ ဖုတ်ထားသောအစာများ၊ ပျားရည်) ကိုကန့်သတ်သင့်သည်။
အစားအစာများကို ၃-၄ နာရီတိုင်း၊ အလယ်အလတ်ခွဲများဖြစ်သင့်သည်။အလွန်အကျွံမစားသင့်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်လည်းငတ်ဖို့မလိုပါဘူး။
အစားအစာကိုနှစ်ကြိမ်ဘွိုင်လာ၊ ပြုတ်၊ ဖုတ်ရမည်။အကြော်၊ အစပ်နှင့်စည်သွပ်ဘူးများစားသုံးခြင်းကိုမထောက်ခံပါ။
ပန်ကရိယ (Pancreatitis) နဲ့ဘာစားနိုင်လဲ။
ခွင့်ပြုထားသည့်နှင့်တားမြစ်ထားသောအစားအစာများကိုအထူးဖွံ့ဖြိုးပြီးအစားအစာ (ဇယားနံပါတ် ၅) တွင်ညွှန်ပြသည်။
ပင်လယ်စာ (ပုစွန်၊ ဂုံး) ကိုပရိုတိန်းဓာတ်မြင့်မားပြီးအဆီနှင့်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်အလွန်နည်းသောကြောင့်ခွင့်ပြုသည်။၎င်းတို့ကိုပြုတ်။ စားနိုင်သည်။
အဆင့် ၁ နှင့် ၂ အဆင့်ရှိဂျုံပေါင်မုန့်ကိုခွင့်ပြုသော်လည်းအခြောက်ခံခြင်းသို့မဟုတ်ဖုတ်ခြင်းဒုတိယနေ့တွင်သင်သည်မချက်ထားသောဘီစကွတ်များကိုသုံးနိုင်သည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအကန့်အသတ်မရှိစားသုံးနိုင်သည်။ပြုတ်ထားသောအာလူးများ၊ beets၊ ရွှေဖရုံသီး၊ squash၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ မုန်လာဥနီနှင့်ပဲစေ့များကိုခွင့်ပြုသည်။သင်သည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သန့်စင်များ၊ စွပ်ပြုတ်များ၊ စွပ်ပြုတ်များ၊ စွပ်ပြုတ်များပြုလုပ်နိုင်သည်။
နို့ထွက်ပစ္စည်းများသည်ပရိုတင်းဓာတ်မြင့်မားသောကြောင့်ကျန်းမာသည်။သို့သော်နို့တစ်ခုလုံးသည်ဖောင်းခြင်းသို့မဟုတ်မစင်ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်မထောက်ခံပါ။၎င်းကိုဂျုံယာဂု (သို့) ဟင်းချိုများတွင်ထည့်နိုင်သည်။kefir၊ အဆီနည်းသောအိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၊ အသီးမပါသောအဆီနည်းဒိန်ချဉ်၊ အချဉ်ဖောက်ထားသောနို့၊ ဒိန်ချဉ်တို့ကိုသုံးခြင်းသည်အလွန်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။သင်ခဲသောဒိန်ခဲကိုစားနိုင်သည်၊ ဒါပေမယ့်အငန်မပါ၊ နံ့သာမျိုးနှင့်အဆီမပါနိုင်ပါ။ပန်းသီးထပ်ပေါင်းပြီးအိမ်တွင်းဒိန်ခဲကိတ်များကိုသင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကြက်ဥများကို steamed omelets ပုံစံဖြင့်ခွင့်ပြုသည်၊ ၎င်းတို့ကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်အချို့ထည့်နိုင်သည်။
ကောက်နှံ။Buckwheat, semolina, ဆန်, oatmeal, ရေ၌ဖြစ်စေ၊ နို့၌ဖြစ်စေချက်ပြုတ်သည်ကိုခွင့်ပြုသည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီနှင့်ထောပတ် (တစ်နေ့လျှင် ၂၀ ဂရမ်ထက်မပိုပါ) ။
Chicory သည်ကော်ဖီကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက်ရွေးချယ်စရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ထို့အပြင်၎င်းတွင်အူလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသော၊ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုကျဆင်းစေသည်။
သစ်ကြားသီးနှင့်အစေ့များတွင်ပရိုတင်းနှင့်အဆီပမာဏများစွာပါ ၀ င်သောကြောင့်အသားသို့မဟုတ်ငါးကိုအလွယ်တကူအစားထိုးနိုင်သည်။နာတာရှည်ပန်ကရိယရောဂါပိုမိုဆိုးရွားလာစဉ်ကာလအတွင်းဤထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်းကိုမထောက်ခံပါ။ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သောကာလ၌တည်ငြိမ်သောခွင့်လွှတ်မှု၊ သစ်ကြားသီးအသုံးပြုခြင်းကိုခွင့်ပြုသော်လည်းပမာဏအနည်းငယ် (တစ်နေ့လျှင် ၃ - ၅ nucleoli) ဖြင့်ခွင့်ပြုသည်။နေကြာစေ့များကိုကြော်ပြီး kozinaki ပုံစံဖြင့်မစားသင့်ပါ။နေကြာစေ့အစိမ်း (သို့) အိမ်လုပ် halva ပုံစံဖြင့်သင်ရနိုင်သည်။Almonds, pistachios နှင့် peanuts ကိုပန်ကရိယရောင်ရောဂါလက္ခဏာမပြသောအခါ၌သာစားသုံးခွင့်ပြုသည်။အခွံမာသီး ၁-၂ လုံးဖြင့် စတင်၍ သူတို့၏အရေအတွက်တဖြည်းဖြည်းတိုးလာသည်။အခွံမာသီးများကိုချက်ထားသောဟင်းလျာများ (စီရီရယ်၊ အသုပ်၊ casseroles) တွင်ထည့်နိုင်သည်။
ပန်ကရိယ (Pancreatitis) နဲ့ဘယ်အသီးကိုသင်စားနိုင်သလဲ။
သစ်သီးစိမ်းများကိုမထောက်ခံပါ။သင်သည်သစ်သီးဖျော်ရည်များ၊ သစ်သီးဖျော်ရည်များ၊ casseroles များပြုလုပ်နိုင်သည်။ဖုတ်ထားသောပန်းသီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ သစ်တော်သီးတို့ကိုစားခွင့်ပြုသည်။ဖရဲသီးနှင့်ဖရဲသီးတို့ကိုသော်လည်းကောင်း၊ သေးငယ်သောပမာဏ (၁ - ၂ မွှာ) တွင်ရနိုင်သည်။စပျစ်သီးများ၊ ရက်စွဲများ၊ သင်္ဘောသဖန်းသီးများသည်အူလမ်းကြောင်း၌ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုကိုမြင့်တက်စေပြီးသကြားဓာတ်များစွာပါ ၀ င်သောကြောင့်မနှစ်သက်ပါ။လိမ္မော်သီး၊ လိမ္မော်သီး၊ အက်ဆစ်ပါ ၀ င်သောအရာသည်အစာအိမ်နာရည်ထုတ်လုပ်မှုကိုမြင့်တက်စေသည်၊ နာတာရှည်ပန်ကရိယရောဂါသည်အစာအိမ်နာ (gastritis) သို့အသည်း (အသည်းရောင်အသားဝါဘီ) နှင့်ပေါင်းပြီးဖြစ်သောကြောင့်မလိုလားအပ်သောအစာအိမ်ဖျော်ရည်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးစေသည်။
နာတာရှည်ပန်ကရိယ (Pancreatitis) ကိုဘာနဲ့မစားနိုင်သလဲ။
အဆီများသောအသားများ (သိုးသား၊ ဝက်သား၊ ဘဲသား)ဤအစာကိုချေဖျက်ရန်အင်ဇိုင်းများစွာလိုအပ်သည်။ရောင်ရမ်းသောပန်ကရိယကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
အဆီများသောငါးများ (mackerel၊ ဆော်လမွန်၊ herring)၊ အထူးသဖြင့်ကြော်ခြင်းကိုတင်းကြပ်စွာတားမြစ်သည်။ဒါ့အပြင်စည်သွတ်ငါးကိုလည်းမစားနိုင်ပါဘူး။
နာတာရှည်ပန်ကရိယရောဂါအတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအစိမ်းမစားသင့်ပါ။တားမြစ်ထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင်အဖြူဂေါ်ဖီထုပ်၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ သခွားသီး၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်၊ ကြက်သွန်နီ၊ မုန်လာဥ၊ ပဲအမျိုးမျိုးတို့ပါဝင်သည်။အမြောက်အများစားသုံးသောအခါ၎င်းတို့သည်အချဉ်ဖောက်ခြင်းကိုမြင့်တက်စေပြီးဗိုက်ဖောင်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။
ကြက်ဥ (သို့) ကြက်ဥအစိမ်းမွှေပါ။အထူးသဖြင့်ကြက်ဥအစိမ်းသည်သည်းခြေရည်ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးနာတာရှည်ပန်ကရိယရောဂါရှိသောလူနာများအတွက်မလိုလားအပ်သောအရာဖြစ်သည်။
ချဉ်သောအစားအစာ၊ လက်လုပ်၊ နံ့သာမျိုး။
အနက်ရောင်လက်ဖက်ရည် (သို့) ကော်ဖီ၊ ချောကလက်ပူပူနှင့်ကိုကိုး
ပထမဆုံးနံနက်စာ (၇း၀၀ - ၈း၀၀): ရေသို့မဟုတ်နို့တွင် oatmeal၊ အမဲသား၊ ကြက်ပြုတ်၊ လက်ဖက်စိမ်း (သို့) rosehip ဟင်းရည်
ဒုတိယနံနက်စာ (၉း၀၀ မှ ၁၀း၀၀): ကြက်ဥနှစ်လုံး၊ သကြားနှင့်အခွံမပါသောဖုတ်ထားသောပန်းသီး၊ နို့ (သို့) လက်ဖက်ရည်နှင့်အတူ chicory တစ်ခွက်
နေ့လည်စာ (၁၂း၀၀ မှ ၁၃း၀၀): ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းရည်၊ ခေါက်ဆွဲ (သို့) ဂျုံယာဂု (buckwheat၊ ဆန်)၊ အသားsoufflé (သို့) ရေနွေးငွေ့ cutlets၊ ဘယ်ရီဂျယ်လီ (raspberry၊ စတော်ဘယ်ရီ)၊ သစ်သီးခြောက်ဖျော်ရည်။
နေ့ခင်းဘက်သရေစာ (၁၆. ၀၀ - ၁၇. ၀၀)၊ အချဉ်များ (အသီးများ (ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီး၊ ငှက်ပျောသီး))၊ အချဉ်ရည်မပါသောအိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၊ လက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်သစ်သီးဖျော်ရည်များ
ညနေစာ (၁၉း၀၀ မှ ၂၀း၀၀): ငါးအသားလွှာ (သို့) ရေနွေးငွေ့ cutlet၊ လက်ဖက်စိမ်း (သို့) အချိုရည်
ညဘက်တွင်အဆင်မပြေသောကွတ်ကီးများနှင့် kefir တစ်ခွက်ကိုသင်သောက်နိုင်သည်။
19 စက်တင်ဘာ 2021
သည်းခံခြင်းနှင့်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုများစွာလိုအပ်သောတင်းကျပ်သော်လည်းထိရောက်သောကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသောအစီအစဉ်များကိုရည်ညွှန်းသောကြောင့်အရက်သောက်ခြင်းသည်အခက်အခဲများအတွက်မကြောက်ဘဲအခက်အခဲများကိုမကြောက်သောသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ဆောင်းပါးတွင်ရေ၊ လတ်ဆတ်သောအရည်များ၊ အသားများ၊ စွပ်ပြုတ်များပါ ၀ င်သောအခြေခံအစားအစာကိုဖော်ပြသည်။
8 စက်တင်ဘာ 2021
3 စက်တင်ဘာ 2021